Eedeymo musuq maasuq oo hareeyay Doorashada Soomaaliya
Hanaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid u burbursan sidii kaabayaasha dalka oo kale. Ma jiro diiwaanka cod bixiyeyaasha, mana jiro sidoo kale hanaanka kaararka aqoonsiga ee muwaadinnimo.
Doorashooyinka iminka dhacaya ma noqon doonaan kuwii ugu dimoqaraadiyeysnaa, laakinse haddii doorashada madaxweynaha ay todobaadkan hagaagto, ayaa waxaa loo arkaa inay noqonayso tallaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya .
Boqolaal ciidammada ammaanka aya ku sugan waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda oo la xiray. Waxaa sidoo kale la hakin doonaa duulimaadyada maalinta Arbacada ah ee ay doorashadu dhaceyso.
Mid ka mid ah walaacyada ugu weyn ee hareeyay doorashadan ayaa ah Musuqmaasuqa. Wax is daba marin xoog leh ayaa la sheegayaa in ay ka dhacaday doorashadii baarlamaanka marakaasoo xildhibaannada qaarkood la sheegay inay codadka iibsadeen. Khubaro ayaa ka digaya in musuqmaasuqu uu wiiqi karo kalsoonidii muwaadiniinta, kuwaasoo horeba aan ugu faraxsanayn inaysan toos u dooranin madaxweynaha.
Ammaanka magaalada Muqdisho oo la adkeeyay maalin ka hor doorashada
Cumar Cabdirashiid oo ka digay ‘faragelinta’ doorashada ee dalalka deriska ah
Waxaa cabsi laga qabaa in kooxda Al- Shabaab ayaa soo qaado weerar inta ay socoto doorashada.
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed: Doorashada wax isdabimarin halaga ilaaliyo